Ibe ekpughere agbakwunyere agwa na kichin gị | Bezzia
Maria onyekwere | 17/06/2022 18:00 | Aghụghọ mma
E nwere ihe ndị dị ka ibé ekpughere nke ahụ ha nwere nnukwu ọnụnọ ma nye ohere ọ bụla na nnukwu mmadụ. Ụlọ kichin na-abụkarị otu n'ime ndị a na-ahọrọ na otu n'ime ndị kasị baa uru site na mgbakwunye nke ihe a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, leba anya na atụmatụ anyị na-ekerịta gị taa.
Ma osisi ma kọnkịtị doo tinye agwa na kichin. Agbanyeghị, nsonaazụ enwetara na otu na nke ọzọ dị nnọọ iche. Ọ bụ ezie na ogwe osisi ndị ahụ na-agbakwụnye ịdị mma na ime ihe n'ime oghere, ndị sink na-egwu egwu na ebe ahụ siri ike nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Kedu ụdị ị chọrọ inye kichin gị? Ị nwere ike iwusi ụdị ahụ ike site na itinye ihe owuwu ụlọ dị ka ndị a ma ọ bụ, jiri nkọwa mbụ nke ụlọ ahụ dị ka ogwe osisi iji mee ka kichin gị mee ka ihe ndị a na-eduzi gị. Ha bụ ụzọ abụọ dị iche iche esi eme ihe ma ha abụọ dị irè.
1 Osisi osisi ekpughere
1.2 ọhụrụ na nke ugbu a
1.3 Obere nkọwa
2 Ibe kọnkịta ekpughere
Osisi osisi ekpughere
Oghere osisi ndị a kpughepụrụ bụ ihe kachasị ewu ewu na kichin. Ma ọ dịghị eju anyị anya, n'ihi na ha na-enye ndị a aka na-ekpo ọkụ nke na-eme ka ọnụ ụlọ a dị mma. Ma ọ bụ na mgbe kichin na-aghọ ebe etiti akwara nke ụlọ, mgbe a na-etinyekwu oge na ya karịa na ndị ọzọ, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ ebe na-ekpo ọkụ.
Ọkụ anaghị apụta mgbe niile nchara, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị. elu osisi eke na-enyere aka welie rusticity nke kichin. Karịsịa ndị nke osisi osisi na-egosi njedebe nke a na-akpụzi site na oge nke oge.
The darker osisi na ka ọ na-ezuru ya, otú ahụ ka ọ ga-eme ka ụdị ejiji nke kichin sikwuo ike. Ọ bụghị kichin niile nwere ụdị ụlọ a, Otú ọ dị, na-achọ ịkwalite ụdị a. Oghere rustic kwụ ọtọ nke nwere mmecha otu dị mma maka ịchọ ụlọ kichin ọgbara ọhụrụ na avant-garde.
ọhụrụ na nke ugbu a
Ibe nwere akụkụ dị ọcha yana ụda ọkara mgbe etinye ya n'elu ụlọ ọcha na n'ebe dị anya site n'ebe ibe ha nọ, ha na-ewetakwu ọhụrụ na kichin. Uko ụlọ na-eku ume na ibé na-aga n'ihu na-enye ọkụ na kichin mana n'ụzọ ọgbara ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ kichin nke oge a, na-egbuke egbuke ma na-ekpo ọkụ, nzọ na ụdị osisi na nhazi a. Ị gaghị achọ, na mgbakwunye, na ha bụ osisi siri ike. Taa e nwere oghere doo na ihe ndị na-eṅomi osisi n'ụzọ na-aga nke ọma nke na-ebelata ọnụ ahịa,
Ọ bụrụ na ịchọghị itinye ogwe osisi n'elu ụlọ mana ị chọghị ịhapụ ikuku ahụ ha na-enye na kichin, jiri ha mee ihe n'ebe ụfọdụ dị ka egosiri na foto a. Anyị hụrụ ha n'anya dị ka ngwá ọrụ maka kewapụ oghere anya: kichin nke ụlọ iri nri, ebe kichin…
Ibe kọnkịta ekpughere
Ihe ọkụ ọkụ amụbaala aha n'ime afọ iri gara aga. ịrị elu nke ụdị mmepụta ihe ọ masịrị ya ma taa enwere ọtụtụ ndị na-eme mgbanwe na-ekpe ekpere ka ha chọta osisi nke ụdị a na ha nwere ike dị ọcha ma hapụ n'ihu. Ma ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na ha na-agbakwụnye àgwà na ọtụtụ ihe na ụlọ.
A naghị eji osisi concrete mee ihe dị ka osisi osisi ma ọ bụ ezie na enwere ike ịmepụta ya site na ọkọ, dị ka ihe eji achọ mma, Ha anaghị agba n'ahịrị. A na-akpachapụ anya iji mee ka ọ dị ka ha na-anọkarị ebe ahụ, na ha nọ ebe ahụ n'ihi na n'usoro dị ha mkpa. Ya mere, ihe a na-emekarị bụ na ha na-agafe kichin ma zuru ike na otu ma ọ bụ ọtụtụ ogidi nke otu ihe.
Ha dabara nke ọma Ọrụ kichin, ma ọ bụghị naanị na ndị a. Dị ka ị na-ahụ na foto ndị a, kichin niile nke kpuchiri ekpuchiri kọmpụta nwere ụdị dị iche iche. Ụfọdụ nwere a ụfọdụ Devid agụghị ndị gbara n'ike mmụọ nsọ, ndị ọzọ nzọ na kpochapụwo ọcha na e nwekwara ndị na-pụrụ iche maka ha minimalist aesthetic.
Kedu ụdị ọkụ na-amasị gị kacha mma ibipụta ụdị mmadụ na kichin gị? Kedu ka ị ga-esi jiri ha mee ihe? Anyị na-atụ anya na foto ndị a emeela ka ị zaa ajụjụ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Aghụghọ mma » Ibe ọkụ egosipụtara na-agbakwunye agwa na kichin gị